अमेरिकामा हिमपातको कहर - Manoj Adhikari
फेब्रुअरी १५, २०२१
ठूलो हिमपात र हिमआँधीले आधा अमेरिका अहिले ढाकिएको छ । दक्षिणको टेक्ससदेखि पूर्वी उत्तरको मेन राज्यसम्मका दुई दर्जनभन्दा बढी राज्यमा एकैपटक हिमपातले असर पारेको अमेरिकी मौसम विभागले जनाएको छ ।
Heavy snow is expected to develop in the vicinity of the Canadian border in western and northern New York this evening, most likely by 9-10 PM EST. Snowfall rates of 1+ inch an hour are possible. https://t.co/dY28asjMBI
खराब मौसमका कारण कैयन् राज्यमा जारी कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान रद्द भएका छन् । कैयन् राज्यस्थित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरका विमानस्थल समेत बन्द भएकाले हजारौं उडान रद्द भएका छन् । रन वे पुरै जमेकाले भोलि मंगलबारका लागि पनि उडानहरु नहुने सूचना जारी गरिएको छ ।
यस्तै नेभाडा र टेक्सस राज्यमा पनि पूर्वनिर्धारित खोप अभियान हिमआँधीका कारण प्रभावित हुने भएका छन् ।
केन्टकी राज्यको यातायात विभागले सडकको अवस्थालाई अत्यन्तै खतरनाक भन्दै बाहिर ननिस्कन मानिसहरुलाई आग्रह गरेको छ । त्यहाँ सडकहरु सफा गर्न दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारी र एक हजारभन्दा बढी उपकरण परिचालन गरिएको विभागको भनाई छ ।
Cold Weather Doesn't Mean Climate Change Isn't Happening https://t.co/Pdgzn3UQzZ#GlobalWarming pic.twitter.com/dI5YlxLDn3
हुस्टन प्रहरीले सडकमा निस्कनु ज्यादै खतरापूर्ण भएकाले घरभित्रै रहन मानिसहरुलाई आव्हान गरेको छ । सधैं व्यस्त रहने हुस्टन सहर सोमबार निकै सुनसान देखिएको छ ।
बाक्लो हिमपातले बिद्युत प्रणालीमा समेत असर टेक्सस लगायत आधा दर्जन राज्यका लाखौं मानिस अन्धाकारमा परेका छन् । टेक्ससमा मात्रै करिब ३८ लाख मानिस बिद्युत अवरोधको मारमा परेका छन् । यस्तै
टेक्ससमा अत्याधिक चिसोसँगै राजमार्गमा ब्लाक आइस जमेकाले कैयन् सवारीसाधन चिप्लिएर धेरै दुर्घटना भएका छन् । यस्ता दुर्घटनाबाट पछिल्ला केही दिनयता १२ जनाको ज्यान गएको छ ।
केही राज्य तथा काउन्टीका अधिकारीहरुले यो हिमपात र जाडोका कारण आगामी केही दिनसम्म कठिन अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति : फेब्रुअरी १५, २०२१